Mogadishu Journal » Lionel Messi oo diyaar u ah kulan Inter Milan ee champion league ga
Lionel Messi oo diyaar u ah kulan Inter Milan ee champion league ga
Messi ayaa dib uga soo kabsaday dhaawac labo todobaad ah kaasi markii uu xidigan gacan kajabay ayaa u muuqda mid soo kabtay waliba si dhow oon lafileen isagoona diyaar u ah in uu koxdiisa ula safro garoonka Inter Milan Stadio Giuseppe Meazza kulanka talaadada soo ‘aadan .
Blaugrana ayaa guleesatay kulankii Camp Nou eey ka badiyeen naadiga Milan tartanka champion legue ga halka ee guul kaqateen kooxda Rayo Vallecano.
warbixin koxdiisa eey sosaartay ayey ku sheegtay in Lionel uu kujiro 22 tan ciyaartoy ee kulankaa losoo xushay iyaadona eeysan jirin daween ku aadan xidiga .
Barcelona ayaa doneesa in eey awodeeda kusoo bandhigto Inter Milan marxalada group yada, balse xidigo dhowr ah ayaa koxda kulanka Milan aan kooxda lasafreen waxaana naadiga kadhawacan Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen and Sergi Samper .
Ronaldo oo ganaax la yaab leh la kulmaya